25 The Best 2021 Soccer Games for Android 【Usetyenziso ngo-XNUMX】 | Izikhokelo ze-Android
Eyona midlalo mihle yebhola ekhatywayo ye-Android
UManuel Ramirez | 21/11/2019 10:37 | Imidlalo ye-Android
Namhlanje sipha eyona midlalo yebhola ekhatywayo ye-Android Uluhlu olukhulu oluza kuqokelela zonke izinto ezahlukeneyo zomdlalo omnandi. Uthotho lwezihloko oza kuba ngoyena mqeqeshi ubalaseleyo okanye umhlaseli nje ophumelela amanqaku ngalo lonke ixesha ibhola ibetha kuye.
Eminye imidlalo yebhola ekhatywayo ye-Android phakathi kwayo oya kuyifumana free, kwii (simahla kodwa ngeendlela zokuhlawula) okanye i-premium. Kananjalo asikulibali ukufikiswa kwezinye zezona ndawo zibalaseleyo zolu didi lwemidlalo ye-Android kwaye iyasimangalisa ngakumbi kwiVenkile yokudlala.
Ukuba ukhetha ukubona ifayile ye- Eyona midlalo ilungileyo yebhola ekhatywayo ngaphandle kwesidingo se-intanethi, jonga kuqala kolu luhlu silungiselele lona:
1 Umphathi weBhola ekhatywayo 2020 Iselula
2 Ibhola ekhatywayo yeRetro
3 I-Stickman Soccer 2018
4 IiNtloko zaMaqhawe
6 Iinkwenkwezi zebhola ekhatywayo
7 Ibhola ekhatywayo yeFIFA
8 I-LaLiga Fantasy MARCA 2020
9 Inqaku! iqhawe
10 Ukubetha kwebhola
11 I-Eleven 2019 ephezulu
12 Umphathi weSoka 2020
13 Umphathi weSoka kwi-Intanethi
14 Ibhola leBhola
15 Iphupha lebhola ekhatywayo
16 Amanqaku omdlalo
17 UCaptain Tsubasa: Iqela lePhupha
18 I-eFootball PES 2020
19 Umlawuli weKlabhu yePES
20 Ukuqokelelwa kweKhadi lePES
21 Umdlalo wokugqibela weKick 2019
22 I-Soccer Soccer La Liga 2019
23 Iinkwenkwezi eziRumble
Ukuqaliswa nje ngeentsuku ze-SEGA ezidlulileyo, lo mdlalo webhola ekhatywayo usithatha ngaphambili ulawulo olupheleleyo lweqela lethu ukumkhokelela kwimpumelelo ngokuphumelela iiligi kunye neetumente. Ngenye ye-saga ephumelele kakhulu, ke ayisiyi nto kwaye nayo yonke imigangatho ebonakalayo esinayo namhlanje kwiselfowuni ye-Android. Ewe kunjalo, hamba ulungiselele i-euro, kuba ngumdlalo weprimiyamu kwaye oko kuthetha ukuba uhlawula wonke umxholo wawo ngaphandle kwentengiso kunye neebhokisi zokuphanga. Ngapha koko, uninzi lwezihloko ezikolu luhlu zii-freemium, ngenxa yoko wonakele ngokuzikhethela ukusukela ngoku.
Ukuba ujonga umdlalo webhola ekhatywayo ngomxholo obonakalayo weMinecraft, Isakhiwo sebhloko esidumileyo kunye nomdlalo wokusinda, iRetro Soccer yeyona ifanelekileyo. Ukuba ngaphambi kokuba sijongane nomqeqeshi kunye nomphathi we-simulator, ngoku sine-arcade yonke apho kuya kufuneka wenze iiteyiphu kubadlali abangena kuwe ngqo. Ukuba ungomnye wabo badlale iKick Off yee-90s (i-strip sele idlulile), uya kuyikhumbula indawo yomdlalo weqonga, kodwa ngabo balinganiswa bebhola banjengoMinecraft. Ekhethekileyo ngaphandle kwamathandabuzo kwaye ekhethekileyo kuyo.
I-Stickman Soccer 2018
Ngeli xesha into isuka umntu oncamathayo ukulingisa imidlalo yebhola ekhatywayo ngokungathi yayinguMphathi weBhola ekhatywayo, kodwa ngokungakhathali kweso sitayile sibonwayo kunye noyilo olukhethekileyo lwabalinganiswa. Isihloko ekufuneka sithathele ingqalelo kwaye oko akusileli kwiinkcukacha zokuthatha isigqibo sokuba ngubani oza kutshintsha kunye nesicwangciso sokuthatha kwimidlalo. Kwaye le ndlela ikhethekileyo yokuqonda uyilo lwebhola ekhatywayo ayikubuyisi umva, kuba inakho konke okwenziwe ngukumkani wezemidlalo kwibhola ekhatywayo. Isihloko seenjongo, ukukhaba ngokukhululekileyo, amabala emidlalo, amakhadi aphuzi, iqhosha lokubaleka ngokukhawuleza nayo yonke into enomdla oyithandayo kakhulu.
Umdlalo webhola ekhatywayo ngokukodwa ubugcisa be-pixel Kwaye loo nto iphambeneyo kukuba ungadibanisa amaqela nazo zonke iintlobo zabalinganiswa abangaqhelekanga. I-arcade engenantliziyo kwimidlalo eqhelekileyo esekwe kumdlalo omnandi, kodwa ukuze ube nexesha elimnandi ngaphandle koxinzelelo olukhulu. Eyona nto imnandi kuzo zonke iya kuba ngamaqela e-wacky oza kujongana nawo. Ukonwaba kukwexeshana. Owu kwaye ivela eChillingo, edibene nezoBugcisa be-Elektroniki, ke ayisiyiyo kwaphela.
Apha uya kuba nakho ukuthatha imidlalo yebhola ekhatywayo ye-craziest owakhe wabona. Ukuba uthanda ukudlala ngokungcolileyo, apha uya kuba nakho ukusebenzisa iziqhushumbisi, amakhaka, iinkomo, iglu kunye nolunye uthotho lwamaqhinga okuphelisa iqela elichasayo kunye nokufumana amanqaku ngeyona ndlela ibalaseleyo kunye ne-hooligan engaphezulu! Kwaye ayinayo ithoni elungileyo yemizobo nokuba kungumlo omangalisayo phakathi kwamaqela owenziweyo ukuze ukwazi ukuwukhulula kwiscreen sakho esiphathwayo.
FootLOL: Ibhola ekhatywayo e-Crazy Simahla! Umdlalo webhola ekhatywayo
Umthuthukisi: Iilebhu zeHeroCraft
Iinkwenkwezi zebhola ekhatywayo
Mhlawumbi khange udlale nawe iibheji xa wawusisiqu, kodwa ezinye izizukulwana ziyayenza. Kwaye kulapho iSoccer Stars ingena khona ukudlala umdlalo onamandla oqhelekileyo kunye neebheji. Umdlalo webhola ekhatywayo oqhelekileyo ongafuni nanye into ngaphandle kokuba nexesha elimnandi kunye nemidlalo yalo ekhawulezayo. Ukuqwalaselwa kwinto yakho yefiziksi ukuze loo macwecwe phantse abonakale ngathi aphilile.
Sibeka ukungakhathali ecaleni kwaye siya ngqo kwenye yee-greats zemidlalo ibhola ekhatywayo: Ibhola ekhatywayo yeFIFA. Imidlalo yabadlali abaninzi, unokwenza iqela lamaphupha akho, uqeqeshe abadlali, ujoyine iiligi, uthathe inxaxheba kwiminyhadala engaphezulu kwama-650 kwaye uyiqhushumbe ngomboniso wezobuchwephesha kunye nokubonakalayo. Ibalulekile kubathandi bebhola ekhatywayo. Kwaye awunyanzelekanga ukuba uthethe nantoni na xa usithi uyakuphila unyathela ebaleni kwaye ukwazi nokudlala namabali ebhola ekhatywayo njengoZidane ngokwakhe. I-ode kumdlalo omnandi.
I-LaLiga Fantasy MARCA 2020
Ukusuka elinye lamaphephandaba ezemidlalo afundwa ngokubanzi, kuza umlinganiselo weligi yebhola ekhatywayo apha kwilizwe lethu. Unokwenza iiligi zakho zebhola ekhatywayo kwaye udlale nabahlobo bakho. Inesiseko sedatha esipheleleyo nesigqibeleleyo ukuze unabo bonke abadlali bamaqela owathandayo.
I-LaLiga Fantasy MARCA️ 2021: Umphathi webhola
Umthuthukisi: ILa Liga Nacional de Fútbol eyiNgcali
Kukubeka ngqo ukuba udlale iqela elinefomathi ethe nkqo kwaye ufunde ukudubula usukelane nazo zonke iintlobo zeziphumo okanye ukwazi ukuqhuba ngokuchasene nabachasi. Ngokubonakalayo ngamava kwaye ngumdlalo kwabo bafuna ukulinganisa amava e-PES kunye ne-FIFA console.
Umdlalo webhola ekhatywayo wabadlali abaninzi ijolise ngqo kwiintsilelo kwinjongo. Imizobo mikhulu kakhulu kwaye kuya kufuneka udlale umdlalo weqonga ukuze ukwazi ukudubula kufutshane nendawo kwaye ngaloo ndlela ubethe unozinti weqela elichasayo. Ngaphezulu kwesigidi esi-1 sokuphononongwa ngokuqinisekileyo sinokuqonda ukuba yenye yeentandokazi zabalandeli bomdlalo omnandi ukusuka kwiselfowuni yakho ye-Android.
Ukubetha ngebhola-ekhatywayo yabadlali abaninzi
I-Eleven 2019 ephezulu
I-simulator yeklabhu apho uya kuthi ube ngumphathi weqela lakho ngako konke okubandakanya. Umdlalo ogqityiweyo osebenzise inani likaJosé Mourinho ukubulala abadlali abangaphezu kwezigidi ezingama-200. Uyakwazi ukuphucula ibala lakho, utyikitye abona badlali babalaseleyo, ulungiselele iiseshoni zoqeqesho kwaye ukhuphisane kwiLigi, iNdebe, iChampions League kunye neSuper League. Umdlalo onokonwabela inqanaba lomzobo kwaye ongaswele nto yokuziva ukuba ungumphathi weqela.
Umphathi weSoka 2020
Dlala eyakho iligi ngokuba umbono we-isometric onika enye i-angle kunye nembono kwimidlalo. Uya kungena ngqo kulawulo lweqela lakho kwaye uthathe isigqibo ngeendlela zokuzisa onke amalungu eqela lakho kubuqaqawuli. Unokukhetha phakathi kweeklabhu ezingama-800 ezivela kumazwe angama-33 kwaye oku kuthetha ukuba unedatha epheleleyo yebhola ekhatywayo phambi kwakho.
Sukuchitha ixesha usebenzisa iscout kwaye unexesha elaneleyo lokuhlalutya imidlalo ukuphucula iqela lakho ngaphambi komdlalo olandelayo. Umdlalo ogcwele ukhetho kunye nesitayile saso sokubonakalayo.
Umphathi webhola ekhatywayo 2020: Umdlalo woLawulo lwebhola ekhatywayo
Umthuthukisi: Umphathi weBhola ekhatywayo Ltd
Umphathi weSoka kwi-Intanethi
Ikwanayo ne database enkulu kwaye ezo Real Madrid azisweleki, IBarcelona okanye iLiverpool. Uyakwazi ukufaka iiligi zoluhlu A, iPremier League okanye iCandelo lokuqala ngokuthe ngqo njengomqeqeshi. Kwaye uyazi ukuba imalunga nantoni, isalathisa yonke imiba yeqela lakho ukuze impelaveki ifike ikwimo entle. Ewe kunjalo, uza kuwubukela umdlalo ngendlela efanisiweyo ngokungathi ubuthe ngqo neqela lakho kwicala lendawo. Umdlalo okwa kuma kwinqanaba eliphezulu lobugcisa.
Umphathi weSoka kwi-Intanethi (OSM) 2021-Umdlalo webhola ekhatywayo
Umthuthukisi: Umdlalo weBV
IGameloft ikwanaso nesindululo sayo somdlalo webhola yomdlalo okhangeleka umhle kwiimfonomfono ezininzi. Njengabanye abaninzi abaqeqeshi bebhola ekhatywayo, uya kuthi bakwazi ukusayina abadlali beenkwenkwezi, ukuphucula izakhono zabo, ukujongana nemiceli mngeni Kwibala leMidlalo leHlabathi okanye ukhethe iiseshoni zoqeqesho. Ukuqaqambisa inqanaba layo lomzobo ukusishiya simangaliswe yinto abafana baseGameloft abaye baba yenye yezona studio zevidiyo zintle kakhulu kwi-Android. Njengabanye abaninzi unayo simahla kwi-freemium.
Sebenzisa umfanekiso Omnye wabadlali beReal Madrid Ukutsala umdla kwaye unelayisensi ye-FIFPro ukuze loo mdlali uthandwayo ukusukela kuloo Barcelona, ​​Liverpool okanye kwakhona iReal Madrid ilahlekile. Kwaye hayi, asijonganga nesimulator yomqeqeshi, uya kuba nakho ukudlala ngokuthe ngqo ukubeka ubulongo, ubabophe kwaye ube yinxalenye yeqela elifuna ukuphumelela uloyiso emva kokuphumelela kumdlalo ngamnye. Mhlawumbi ngokomzobo ayisiyiyo eyona ilungileyo, kodwa kukudlala umdlalo esinomdla kwesi sihloko se-Android.
Omnye umdlalo kuluhlu lwamanqaku olusinyanzelayo ukunxiba iibhutsi zethu kwaye siye kwiqela elithile ukuzama ukunika ithuba lokufa oko kuthetha ukuba injongo yokuphumelela kwiqela lethu. Isihloko esifanelana kakuhle nemifanekiso kwaye egxile ngakumbi ekudlaleni imidlalo kunokubabona ngokwembono yomqeqeshi. Uninzi luthanda ukuya kulokugqibela, ke sele uyazi ukuba apha uya kufumana into eyahlukileyo kuninzi lwezihloko ezinxulumene nokuba ngumphathi. Uya kwenza i-dribbling, ukuwisa, ukudlula, ukudubula kunye nazo zonke iintlobo zokuchuma phambi kwabo bakhuseli banamava.
Inqaku! Umdlalo-webhola ekhatywayo PvP
UCaptain Tsubasa: Iqela lePhupha
Kwaye siya kwenye Kuthotho lwebhola ekhatywayo laziwa kakhulu ngalo lonke ixesha: Iintshatsheli. Ngegama uKapteni Tsubasa, kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo wafika kwi-Android ukusibeka phambi kweyona miboniso bhanyabhanya inomdla kuyo yonke imidlalo esiyibize ngoluhlu. Uya kuba nemiboniso bhanyabhanya efanayo engenasiphelo kuthotho lwezoopopayi, musa ukumangaliswa yiyo kuba sijongane no-Oliver noBenji kunye nale midlalo ingazange iphele.
UCaptain Tsubasa (Oliver noBenji): Iqela lephupha
Kwaye ukuba iFIFA iyinto yonke kwimidlalo yebhola, Kukwanjalo ke nangePES 2020. Omnye weyona midlalo mihle kwaye ikwanayo kwi-Android ukuba sonwabe. Ijolise kumdlalo we-intanethi we-eFootball kunye nemidlalo ethe ngqo apho uya kuba ngumdlali ophambili. Umdlalo oza ngeefowuni eziphathwayo kunye nayo yonke imbali yeKONAMI kwaye ushiya kungekho mntu ungakhathaliyo. Ukusuka kwezona zilungileyo zolu luhlu ukuvelisa awona mava ebhola ekhatywayo kunye nesiseko sedatha esikhulu. Ukuba ufuna ibhola yokwenyani, i-PES okanye iFIFA, akusekho. Owu, kwaye imidlalo ikwi-Intanethi kwaye ngexesha lokwenyani, into uninzi lwabo olu luhlu olunokuthi.
Umlawuli weKlabhu yePES
Ukuba kwi-KONAMI yangaphambili besidlala nebhola, apha sizakuba ngumqeqeshi wokubukela imidlalo ngokwale mbono. Isihloko esingenakho ukusilela kumgangatho kwaye lelo liqabane elifanelekileyo lokuhamba ngePES. Umdlalo webhola ekhatywayo wePro Evolution ovela kwinqanaba lomqeqeshi kunye neqela lexesha le-2019-2020 kwaye apho iArtificial Intelligence ithatha ukubalasela okukhulu ukuze imidlalo ingabi lula kwaphela. Amava oqeqesho apheleleyo kunye nezigidi zokukhutshelwa, ngaba uza kuyiphosa?
UMLATHI WENGCALI YESI-PES
Ukuqokelelwa kweKhadi lePES
Kwaye kuba akukho babini ngaphandle kwesithathu, masihambe nomnye umdlalo webhola ekhatywayo wePro Evolution kodwa kugxilwe ekuqokeleleni amakhadi omdlali. Yiza, ngokungathi zizincamathelisi zobomi esizitshintshisa noogxa bethu esikolweni. Injongo yakho iya kuba kukwakha iqela lamaphupha nawo onke amakhadi owathathayo. Asinalo ulwimi ngeSpanish, ke ukuba uyakwazi ukuhamba ngesiNgesi, uya kuba ne-aces ezintathu kunye nale, eyangaphambili kunye neyokuqala i-PES.
Kwaye phantse ukugqiba umdlalo kule post, sihamba ngeKick Final 2019 kwaye yintoni ijolise kwizohlwayo. Abo bathatha isigqibo semidlalo kwaye xa befika emva kwexesha elongezelelekileyo, ngokungangabikho amaqela amabini anokuphumelela, benza nabona badlali babalaseleyo emhlabeni boyike kakhulu. Isihloko esihle kakhulu kwinqanaba lomzobo kwaye simi kanye kwesi sizathu. Kuyinyani ukuba ngokujolisa kwimbono efanayo, ungabonisa ezona mifanekiso zilungileyo zokuvelisa amava ebhola ekhatywayo kwiselfowuni yakho. Omnye wale midlalo yokuhamba ne-PES kunye nabanye abakolu luhlu.
I-Soccer Soccer La Liga 2019
Nguye Umdlalo osemthethweni weLa Liga apha eSpain, kwaye ngenxa yeso sizathu ithatha ukukhankanywa okhethekileyo. Umdlalo oqhelekileyo kuyilo lwebhola ekhatywayo kunye nesitayile somdlalo weqonga apho uya kuba nakho ukufumana amanqaku ngeentloko. Ingakumbi kwiintloko ezinkulu zebhola nganye kwiqela ngalinye leLa Liga. Kule midlalo yomdlalo oqhelekileyo ngexesha lekhefu leqela lakho olithandayo.
INtloko yeBhola ekhatywayo yeLaLiga-iMidlalo yeBhola ekhatywayo 2021
Kwaye siyaphela i-arcade iyonke kwaye ethatha ibhaso lokuba yenye yezona zinto zingqangi Uluhlu lonke. Izilwanyana ziya kuba ngabadlali bebhola ekhatywayo, kwaye ukusuka kumbono womoya uya kuba nakho ukuhambisa ngqo ibhola kunye nebhola. Abadlali abaninzi bebhola ekhatywayo ukugqiba uluhlu kunye nemidlalo yebhola ekhatywayo ebalaseleyo onayo ye-Android. Andicingi ukuba silahlekile, kwaye ukuba kunjalo, sixelele kumagqabantshintshi.
I-Rumble Stars yeBhola ekhatywayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Imidlalo ye-Android » Eyona midlalo mihle yebhola ekhatywayo ye-Android
Molo, ngaba ukhona umdlalo we-android oyindlela yebhola ekhatywayo? Kodwa ayisiyondlela iphantsi leyo. …. Ngaba ukhona umntu owaziyo umdlalo wolu hlobo?
Indlela yokusebenzisa ulawulo lwabazali kwi-Android, inyathelo ngenyathelo
Ungayithumela njani iminxeba kwenye inombolo kwi-Android?